प्रचण्डलाई ओलीले लात हानेपछि ठीक भाछ: देउवा – Gorkhali Dainik
प्रचण्डलाई ओलीले लात हानेपछि ठीक भाछ: देउवा
April 9, 2021 63
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । अहिले देशमा देखिएको राजनीतिक संकटको प्रमुख दोषी प्रचण्ड भएको बताउदै निजामती कर्मचारी युनियन संघको शुक्रबार काठमाडौंमा गरिएको विधान अधिवेशन उद्घाटनका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्।
२०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा चितवनमा रेणु दाहाललाई जिताउन तालमेल गरेका देउवाले आमनिर्वाचनपछि पनि आफूले त्यही प्रस्ताव प्रचण्डलाई राखेको बताए। ‘आमनिर्वाचनपछि मैले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्‍न प्रस्ताव गरेको थिएँ। तर वाम एकता भन्दै प्रचण्डजीले ओलीलाई सत्ता सुम्पिदिए। मैले पटक पटक प्रधानमन्त्री बन्‍नु भनेँ तर मानेनन्। आफैँ ओलीलाई सत्ता बुझाएर खुट्टा नटेक्नेलाई अहिले ओलीले लात हानेपछि ठीक भएको छ। वास्तविक कुरा यो नै हो।’
देउवाले नेपालको संविधान अनुसार एक चौथाइ सदस्यले कुनै विषय लिएर संसद बोलाउन माग गर्न सक्ने बताए। तर आफूसँग त्यो संख्या पनि नभएकाले समस्या भएको सुनाए। ‘ओलीलाई हटाउने सांसद संख्या अझै पनि हामीसँग पुगिसकेको छैन’, उनले भने, ‘हटाउन संख्या त पुग्नुपर्यो नि! त्यतिकै हटाऊँ हटाऊँ भनेर मात्रै हुन्छ ?’।
उनले कांग्रेसलाई भोटै नहालेर जनताले सानो पार्टी बनाइदिएकाले चुनावमा जाऊँ भनेको बताए। ‘दुइटा पार्टी मिले जनताले भोट हाले त हामीले के गर्नु। जनताले हराए त हामीले के गर्नु। त्यही भएर हामी जनताको घर दैलोमा जाऊँ भनेकोु’ उनले भने, ‘हामी कांग्रेस हौँ, धाँधली गर्दैनौँ। जनताको भोट हामीले पाउनुपर्छ। ओलीलाई हटाउने त हो तर भए न भने पनि हामी चुनावमै जानैपर्छ। चुनावबाहेक अर्को बाटो हुन सक्दैन।’
उनले कांग्रेसलाई भदौमा महाधिवेशन गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको सुनाए। ‘हाम्रा लागि कसैले संविधान संशोधन गरिदिँदैन’, उनले भने, ‘संविधान संशोधन गर्न पनि दुईतिहाइ चाहिन्छ। अहिले त्यो अवस्था छैन। अब हामीले महाधिवेशन पनि गर्नै पर्नेछ।’
उनले ओलीलाई बिदा गर्ने निर्णय पार्टीले लिइसकेको पनि बताए। ‘कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय लिइसकेका छौँ, यसमा तपाईंहरुलाई पनि धन्यवाद छु, उनले भने, ‘तर म आफू नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्‍ने छैन। मैले आज पनि बैठक राखेको छु। नयाँ सरकार बने ठीकै तर त्यसो भएन भने चुनाव उपयुक्त विकल्प हो, त्यसका लागि हामी सबै तयारीमा जुट्नुपर्छ।’
Prevनोबेल अस्पतालको लापरबाहीले ‘भ्याकुम’ले तान्दातान्दै नवजात शिशुको टाउकोमा प्वाल, छातीमा चो ट देखियो…
Nextप्राथमिकताभन्दा पहिले खोप लगाउने जर्मनीका एक मेयर परे निलम्बनमा
मासिक १० हजार पाउने भएपछि …………यातायात सुबिधाबापत डाध्यक्षले फिर्ता गरे मोटरसाइकल…!
एक्कासी आयो यस्तो खबर ! कति पुग्यो त सुनको मूल्य .. हेर्नुहोस!
काठमाण्ड़ौ बाट आऊदै गर्दा दुर्घटनामापरेको हुदा चिन्नुहुनेले परिवार लाई खबर गरिदिन अनुरोध गर्दछु
गौरी मल्लको प्रश्न–‘धरहरा त उठ्यो, हामी कहिले उठ्ने ?
बर्दियामा बाघको फेरि आ”क्र,म,णबाट पुलिसराम को मृ;त्यु (7072)
भोलिदेखि गाडि चल्न नदिइने ! (3881)
दुखद खबर : अभागी आमा चम्ल्याहा बच्चाको जन्म त दीईन तर मुख हेर्न पहीन्न, आमाको मृत्यु (3600)
BREAKING NEWS: नेपालमा भित्रियो नयाँ भाइरस, भोलि देखि १ महिना सम्म लकडाउन, पुरा हेर्नुहोस् (3446)
ब्लड क्यान्सर हुनुअघि शरीरले दिन्छ यी ५ संकेत, नगर्नुहोस् वेवास्ता (2839)
वातावरण मा अझै सुधार नआएकाले थप ७ दिन विद्यालय बन्द गर्ने मन्त्रालयको निर्णय ? (2404)
हिजो मात्र बिहे गरेको फोटो राखेका यी जोडीले एक साथ गरे झु’न्डि’एर आ’त्म ह’त्या (2321)
बागलुङमा होली मनाउदा ‘झडप’, करिब १५ युवा यसरी भिरबाट खसेको आशंका (भिडियोसहित) (2081)
“आ’खिर किन,यस्तो भनिन् बालिका, खड्का,ले शेरधन लाई, सबैको अगाडी” (1942)
हार्दिक बधाई : रेखा थापाले यि हेण्डसम युवक संग लगनगाठोँ कस्दैँ ? (1891)
लोकप्रिय गायक प्रकाश सपुतलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि
सं’क्रमितले उपचार त पाउन सकेनन ,१५ घण्टासम्म बुवा आमाको श’व घरमै
प्रचण्डको पत्नि सीता दाहालको अवस्था चिन्ताजनक आइसियुमा राखेर उपचार हुदै